Kulamo Adag oo ka socda magaalada Dhuusamareeb | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Kulamo Adag oo ka socda magaalada Dhuusamareeb
Kulamo Adag oo ka socda magaalada Dhuusamareeb
Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusomareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in xalay magaaladaasi ka dhaceen kulamo hoose ay lahaayeen Madaxda dowlada federaalka iyo madaxda maamulada qaar.
Ra’isul Wasaaraha xukuumada Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sidoo kulamo kawada magaalada Dhuusomareeb, waxa uuna inta badan kulamo la qaatay Madaxda maamul goboleedyada ee jooga Dhuusomareeb.
Madaxda maamulada qaar ee jooga magaalada Dhuusomareeb ayaa sidoo kale iyana yeelanayay kulamo ay kaga arinsanayeen sidii ay mowqif mid ah isugu raaci lahaayeen iyo sida ay shirka u wajihi karaan.
Magaalada Dhuusomareeb ayaa la filayaa in uu ka furmo shirka madaxda dowlada Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana shirkan oo ah mid xasaasi ah diirada lagu saari doonaa muranka doorashada Soomaaliya iyo nuuca ay noqoheyso.
Madaxda ku sugan magaalada Dhuusomareeb ayaa sidoo kale sameesaneysa isbaheysiyo ay isku aragti yihiin, waxaana isha lagu wada hayaa waxa kasoo bixi kara shirka la filayo in uu ka dhaco magaalada Dhuusomareeb.
Previous articleDegmada Afgooye oo Gar Gaar Deg Deg ah u Baahan
Next articleMadaxweyne Farmaajo iyo Istraatiijiyadda uu ku iibinaayo qorshaha muddo kororsiga !!
Saraakiisha amniga Mareykanka oo ka digay suurtagalnimada khatar ka iman...